Pane chimwe chinhu chakavanzika chekusimudzira mapeji ekumisa mabhasi?
Ungave uri we realtor, mutengesi weimba, kana unyanzvi hwemaimba, iwe unotanga kutanga kusika mapeji ekumisa kwevangangodaro nevatengi kuti avatungamirire pedyo nenzvimbo yekutenga. Kunyora peji yekutengesa kwemaimba iyo inotora zvinotungamirira haisi iyo yakaoma sezvinofungwa nomunhu. Nhasi, ini ndichataura kuti ndingagadzira sei kuchinja kwekushandura mapeji edzimba.
Mazano ekugadzira nekusimudzira mapeji ekugadzirisa matengesi echokwadi
Craft magnetic musoro
Ongorora pamusoro pekugadzirisa. Iva nechokwadi chokuti peji yako yekutsigira ine zvinyorwa zvakajeka uye zvinyorwa zviri nyore uye zvinonakidza kuverenga. Chengetedza ivo nyore kuburikidza vachishandisa mutauro chaiwo. Iva nechokwadi chokuti musoro wako wepamusoro unopa vaverengi neruzivo rwavanenge vachitsvaga, vachisimbisa kuti vari munzvimbo yakarurama uye zviri nyore kuti vakwanise kuburikidza. Sezvo nhamba dzichiratidza, iyo yakanakisisa yekutsika peji yepamusoro misoro inotaura zvakadzama manzwiro emufaro ekuita bhizinesi newe. Semalt nyanzvi dzinonongedza kudirana mukutumira kwako kwekutanga, email kana blog kuburikidza nepeji yepamusoro peji. Nyaya yakareba kwenguva refu: ipai vatengi venyu zvavari kuda, uye vachadzoka.
Munhu oga anotarisana nenyaya
Sekutonga, pamusoro-yakatarisa realtors vanoziva vateereri vavo mukati nekunze. Shandisa nguva yako mukuziva kuti ndeapi nzira kana sarudzo vanosarudza. Izvi zvichakupa kunzwisisa kwakanakisisa kwemashoko ekupa kwavari uye mune nzira ipi yekubata vatashanyi kana vachinge vava vatengi vakakwana. Kupa vashandi mashoko avanoda kunobatsira kuti urambe uri mberi kwekwikwidziro yako.
Uchapupu hunowedzera kuvimba
Uchapupu huri chinhu chine simba chinogona kukubatsira kukurudzira mapeji ako ekutsika kweimba. Paunosarudza uchapupu, tevera mazano aya:
Sarudza izvo zvinonyanya kukosha kune vavariro yako;
Shandisa zviratidzo kana zvichibvira - mafirimu nevhidhiyo inzira yakanakisisa yekuvaka kuvimba uye kubata vateereri vako kutarisa;
Sarudza zvipupuriro zvinosanganisira nhamba chaiyo kana tsanangudzo dzinobatsira mufananidzo weklayiti.
Inokurudzirwa kwazvo kuti iwe unosanganisira maCTA mumapeji ako ekutsika kweimba. CTA ndiyo yekupedzisira yekubatana uye mukana wokupedzisira wekushandura vashanyi vako. Paunenge uchigadzira call-to-action pane peji yako yekutenderera, shandisa mazano anotevera:
Funga kugadzira bhokisi guru mumuvara unoona. Iva nechokwadi kuti inopfuurira kuongorora kweclicint kuitira kuti mushumiri wako arege kukanganwa.
Ita zvekugadzira. Hapana munhu anotora jazzed kuti 'atishevedze isu. 'Ita kuti CTA yako ive inonyengetedza uye inofadza. Yeuchidza muverengi zviri mukati mavo.
Ongorora pane imwe danho rinotevera unoda kuti mutengi wako atore. Usambovhiringidza mushanyi nemhando dzakasiyana-siyana dzakasiyana. Vaudze zvakanyatsoita kuti zviite sei: Taura nesu. Nyorera. Tora izvezvi.
Yeuka, mapepa anobudirira ekumisa kune zvose pamusoro pokuisa mutengi wacho kutanga. Muna 2017, kune mikana yakawanda yevatori vemazvirokwazvo vanoda kutora nzira yakasiyana neyekugara kwemaimba. Nokudaro, inzwa wakasununguka kuenda kune zvinopfuura mitemo uye ufare nazvo. Chero bedzi iwe uri kuisa vatengi vako pakutanga, iwe chokwadi uchakunda Source .